Uluhlu lweNtengiso yePropathi yokuthengisa kunye nokuRentela eMelbourne, eVictoria
I-1-8 yoluhlu lwe-8
Bolton Clarke Kwinkxaso yeKhaya-Vic
IBolton Clarke Kwinkxaso yekhaya-VICBe ngokwakho, naphi na apho uhlala khona. Ligama elinokuchaza naliphi na inani leemeko kunye neemeko. Naphi na apho uhlala khona, siya kusebenza kunye nawe ukubonelela ngenkxaso kunye neenkonzo ozifunayo ukuze uphile ubomi obungcono. Bolton Clarke At Home Support is run ...
Ukucoca isitya esingaqhelekanga eMelbourne
Ukucoca i-Steam eyahlukileyo yeyona nkampani icocekileyo kunye nengcali yokucoca ikhaphethi eMelbourne. Sinamava eqela labacoci beekhaphethi abaziingcali kwaye sonwabile ukunika abathengi bethu iinkonzo. Inkampani yethu yokucoca ngokupheleleyo esekwe eMelbourne, eOstreliya.
umbono Ukucoca Abakhi ishicilelwe kwiinyanga 6 ezidlulileyo
Inkampani yokucoca i-OZ duct yokucoca iMelbourne yeyona nto inokuthenjwa nehlonelwayo, ngokuzinikela ekuziseni iinkonzo zobungcali kunye neziphumlisi ngamaxabiso afikelelekayo. Sineqela elikhethekileyo lokucoca i-duct elicocekileyo laseMelbourne elinamanqanaba aphezulu emigangatho kunye namava ococeko kunye ...
umbono Ukucoca Abakhi ishicilelwe 1 konyaka
UT Taylor kunye noMntwana bayakuvuyela ukuba ngumnxibelelanisi wokuqala wezandla zikaMelbourne ngaphezulu kweminyaka eyi-30. Iqela lethu lineminyaka emininzi yamava ahlanganayo anikezela ngemibhobho engcono kunye neenkonzo ezifanelekileyo zeRhasi kunenani elikhulu labucala, ishishini, kunye nabathengi banamhlanje. Sisonke, sincede imibutho yokutshintsha ekhaya, injineli ...
umbono Abahambisi bokuPhucula iKhaya ishicilelwe I-2 iminyaka edlulileyo
Ngaba igumbi lokuhlambela alisebenzi kakuhle kwaye livumba elimnandi elivela kwizindlu zangasese endlwini yakho? Okanye ufumene ishawa kunye neempompo zingasebenzi kakuhle? Ngokuqinisekileyo, ufuna uncedo olungxamisekileyo lokusombulula iingxaki ezinjalo? Emva koko, ungakhathazeki nje ubize i-Plumber Melbourne yobungcali bokubuyisela i-hou yakho ...
umbono Abahambisi bokuPhucula iKhaya ishicilelwe I-3 iminyaka edlulileyo
I-Melbourne Movers n Iipackers | Eyona ndawo ihamba phambili eMelbourne | Ifenitshala yexabiso eliphantsi M ...
I-Melbourne Movers n Iipackers ziimpawu eziphezulu kakhulu ezikwiMelbourne kwaye ukuba ukhangela iingcali ezihamba nomgangatho onguwona uphambili singabokuqala kunye nabaphethe eMelbourne. http://www.melbournemoversnpackers.com.au/
Published by Manider Brar
umbono Iinkampani eziHambayo ishicilelwe I-3 iminyaka edlulileyo
Ukhuseleko Doors Melbourne
Yongeza inzondelelo entsha kunye ne-charisma ngokufaka iingcango zokhuseleko lweMelbourne ukusuka kwiDial A Doors Melbourne. Sizise uyilo olukhethekileyo kunye nokuqokelelwa kweengcango ezifanelekileyo kwimiyilo yoyilo lwekhaya lakho kunye neemfuno. Xa iimveliso zethu uya kufumana iminyaka engama-40 yamava kunye neetekhnoloji ze-erudite ...
IMelbourne ((mamela) i-MEL-bərn) sesona sixeko sikhulu kunye nesona sixeko sabantu abaninzi eOstreliya eVictoria, kwaye sesesibini isixeko esihlala abantu abaninzi eOstreliya naseOceania. Igama laso libhekisele kudibaniso lweedolophu lwe-9,992.5 km2 (3,858.1 sq mi), equka indawo yedolophu kunye nomasipala be31, ikwayigama eliqhelekileyo lesixeko sayo. Isixeko sihlala ikakhulu kunxweme lwePort Phillip bay sisasazeka kwiindawo ezinqamlezayo ukuya kumda weDandenong kunye neMacedon, Inqanawa yaseMornington kunye neYarra Valley. Inabemi abamalunga ne-5 yezigidi (i-19% yabemi base-Australia), kwaye abahlali bayo babizwa ngokuba "yiMelburnians" .Isixeko sasekelwa kwi-30 ka-Agasti 1835, kwikholoni yase-New South Wales yase-Britane malunga. abahlali abakhululekileyo abasuka kwikoloni yoMhlaba waseVan Diemen (iTasmania yanamhlanje). Yabandakanywa njengendawo yokuhlala yaseCrown kwi1837 kwathiwa igama kwiNkulumbuso yaseBritane, uWilliam Lamb, i-2nd Viscount Melbourne. Kwi-1851, kwiminyaka emine emva kokuba uKumkanikazi uVictor ebhengeze ukuba sisixeko, iMelbourne yaba likomkhulu lekoloni entsha yeVictoria. Ukuvuka kwe1850s yeVictorian yegolide engxamile, isixeko singene kwixesha elide le-boom elathi ngokufika kwe1880s, lasiguqula laba lelinye lawomhlaba omkhulu kunye nobutyebi belizwe. Emva komanyano lwase-Australia kwi1901, yasebenza njengesihlalo sethutyana sikarhulumente wesizwe esitsha de iCanberra yaba likomkhulu kwi-1927. Namhlanje, liziko eliphambili lezemali kwingingqi yeAsia-Pacific kwaye libeka i15th kwiZiko leMali yeHlabathi yeLizwe.Isixeko likhaya lamaziko amaninzi enkcubeko awaziwayo kwisizwe, njengeMelbourne Cricket Ground, yeSizwe Igalari yaseVictoria kunye neLizwe leLizwe leLifa leMveli lidweliswe. Ikwayindawo yokuzalwa kwembonakalo yase-Australia, imithetho yebhola yase-Australia, imiboniso bhanyabhanya yase-Australia kunye nomabonwakude kunye nomdaniso wexesha lase-Australia. Kutshanje, kuye kwaqwalaselwa njengesiXeko seNcwadi yeUNESCO kunye neziko lehlabathi lobugcisa besitalato, umculo ophilayo kunye nomdlalo weqonga. Sisisixeko esisingatha iminyhadala yaminyaka le yamazwe aphesheya njengeAustralia Grand Prix, iAustralia Open kunye neMelbourne Cup, kwaye ibambe ne-1956 Summer Olimpiki kunye neMidlalo ye-Commonwealth ye-2006. Ngenxa yokulinganisa ubukhulu becala kwezolonwabo, ezokhenketho kunye nezemidlalo, kunye nemfundo, ukhathalelo lwempilo, uphando kunye nophuhliso, i-EIU okwangoku ibeka njengesixeko sesibini esimi emhlabeni.Isikhululo senqwelomoya esisebenza esixekweni sisikhululo seenqwelomoya saseMelbourne ukuya kwisikhululo senqwelomoya saseTullamarine), eyindawo yesibini exakeke kakhulu eOstreliya, kunye nolwandle oluxakekileyo e-Australia kwizibuko laseMelbourne. Isikhululo sayo sikaloliwe esikhulu esikufutshane nesikhululo sikaloliwe iFlinders esitratweni kunye nesitalato sayo somgaqo kaloliwe omkhulu kunye nesitishi somqeqeshi wezendlela sisikhululo esingumzantsi wecandelo. Inayo nenethiwekhi ebanzi kakhulu yendlela e-Australia kunye nenethiwekhi enkulu yedolophu yetram emhlabeni.